News & Events — 3-ACT Film
One of our founders and editors, Aung Phyoe’s short film has been officially selected to compete in Locarno Film Festival.
Cobalt Blue is set in the late 1990s in Yangon, and featuresaboy and his mother waiting for their father, who isacivil servant working inatown in upper Myanmar, to return home. With time on his hands, the boy starts trying to understand the complexities of the relationships within his family.
We are glad to present our first narrative experimental short film "Her Mirrors"
3-ACT ကပထမဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတိုကိုမိတ်ဆက်ပါရစေ။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ကူညီပေးခဲ့ကြသောသူ အားပေးခဲ့ကြသောသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုဆို post-production နောက်ဆုံးအဆင့်ပြီးနေပါပြီ။
Thanks to the crew -
Moe Myat May Zarchi, Michael Zaw, Thet Zaw Win, Tin Htet Paing, Nay Pann Chi, Zune Ei Htet, Myo Min Khin, Ito, San Yae Aye, Nay Wunn Ni, Tra Bo Eain, Hnin Pwint, Kyaw Win Tun, Khin Maung Kyaw, Su Lay Ngone, Yu Yu Myint Than, Aung Phyoe, Aye Tha Soe, Sai Kham Leik, Myo Thar Khin, Ko Htwe, Ko Nge Lay, Ko Nay Zaw, Ko Thar Nge, Ko Zwal Thu, Pyae Phyo Naing, Yan Naung, Yan Lin, Phoe Zaw, Khaing Lin, Arnold
A visit to Sayar U Win Pe's studio to talk about the openness and depth of films, subjective and objective value of cinema, asethetic sense in films and the soul of an artist for our next issue.
A presentation, panel discussion and Q&A section at National University of Arts & Culture (NUAC) to discuss about the vision of cinema magzine and community, professions, working nature and networking in Myanmar film industry, roles in film production, finding passion in storytelling and furthering self-education in films. Thanks to Nay Wunn Ni for organizing the event for the betterment of community. Thanks to the university for having us.
Photos by Myo Thar Khin
Thank you all for coming to the 3-ACT Issue3(Narratives: Lost and Found) and the film screening and the discussion of The Scent of Green Papaya led by Dr. Aung Min at Film Development Center.
3-ACT ကို National University of Arts & Culture (NUAC) ရဲ့ Silver Jubilee တွင်ရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်။ ရုပ်ရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဝေမျှပေးတာပါ။
ဒီနေ့ ကိုဇော်ဇော်၊ ကိုဏကြီး၊ ကိုကျော်ကြီးတို့နဲ့ 3-ACT အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ ကိုဟန်ဇော်၊ မမိုးမြတ်၊ မတင်ထက်ပိုင်၊ မစမ်းရအေးနဲ့ မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရဲ့ Art Direction (Production Design, Costume) အကြောင်းနှင့် အမြင်ပိုင်း design ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Audition for “Her Mirrors” by 3-ACT Film, held at Myanmar Film Development Center
3-ACT Issue2flying all around town among our readers and distributors.
Hadagreat discussion with Vincent, the editor from the renowned magazine Cahiers Du Cinema with 3-ACT Team. Looking forward to our feature in their magazine!
3-ACT Cinema Magazine Issue2(Through Her Lens) Launch Party at Waziya Cinema
Attendees 3-ACT Founder Moe Myat May Zarchi and Co-Founder Aung Phyoe as Guest of Honor at MEMORY! International Heritage Film Festival 6th Edition.
Carte Blanche to 3-ACT by MEMORY! Film Festival 6th Edition
The curation of films of 3-ACT section is to experience films that we highlighted in Issue 1 and Issue 2. We hope 3-ACT to act asasupport essential in studying and experiencing these films.
This section will open with “Vagabond (1985)” directed by Agnes Varda. “Vagabond” was curated for its bravery of honest and neutral representation ofawanderer woman character who has no ambitions but wanders to find her own essence of life. In 3-ACT Issue2Director’s Retrospective Category, Agnes Varda’s directorial traits are studied and explored together with the interview with her conducted by 3-ACT team. There is alsoaspecial screening of this Skype session conversation with Agnes and Moe Myat May Zarchi (3-ACT) prior to the screening of the film that addresses Agnes art and the inspiration behind “Vagabond”.
Presented in Issue 1 Film History Category, classic narrative shorts that defined the birth of film history including “A Trip to the Moon (1902)”and others significant shorts are curated to give insight that the beginning of the cinema is always the most magical and innovative. We also paid tribute to Yasujiro Ozu with his film “Late Spring” (1949) which we analyzed in Issue 1 Director’s Retrospective Category. For the groundbreaking film movements that challenged the momentum of film industry, we selected “Pierrot Le Fou” (1965) to represent French New Wave and “Eros + Massacre” (1969) to represent Japanese New Wave, which one can read at Issue 1 and Issue 2. To represent the nature of cinematic time and visual landscape, we also curated “The Mirror” (1975).
MRTV-4 morning show interview with our Founder, Moe Myat May Zarchi and Daw Grace Swe Sin Htike on 3-ACT and MEMORY! Film Festival.
It wasagreat honor that 3-ACT was invited asapress to attend 31st Tokyo International Film Festival that was held in Roppongi from 24th of Oct to 1st of Nov
Review by our reader, Moe Latt
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာစရာ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ် /
“ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ ရှိပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ လူမျိုးမှ မဟုတ်ဘဲ။ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်တွေ ရှိတယ်။ နည်းတွေ ရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း မီချင်တယ် ဘာညာ ပြောနေကြတယ်။ ကမ္ဘာဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ကမ္ဘာထဲမှာပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ မြန်မာစစ်တဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုစစ်စစ်ကို ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့သာရိုက် ဒါ ကမ္ဘာကို မီတာပဲ”
- ဒါရိုက်တာမောင်ဝဏ္ဏ ( ၁၉၈၃ )
မြန်မာပြည်တွင် စက္ကူဈေးများတက်သည်။ ကျသည်ရယ်လို့မရှိ။ ထုတ်ဝေသူများကို အလဲထိုးသည်။ သတင်းစာဂျာနယ်အချို့မှာ မြင်နေကျ ဗန်းဆိုင်များတွင် မတွေ့ရတော့ပေ။ ၉၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တစ်စထက်တစ် လျော့နည်းပျောက်ကွယ် မေ့မျောနေသော မဂ္ဂဇင်းယဉ်ကျေးမှုမှာလည်း ပြန်လည် သတိရလာနိုင်စရာ လမ်းမမြင်။ ထိုအချိန်တွင် ယခုနှစ်အတွင်း သတိထားဂရုပြုရမည့် မဂ္ဂဇင်းနှစ်စောင် ထွက်လာသည်။ တစ်ခုမှာ နှစ်အတန်ကြာ ရပ်နားပြီးမှ ပြန်လည် ထုတ်ဝေလာသော စာပေဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ခုမှာတော့ ရုပ်ရှင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းပင် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စက္ကူဈေးများ မြင့်တက်နေချိန်နှင့် ကျဆင်းမှုမရှိသော ဒေါ်လာဈေးတို့အကြား ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်များဖြင့် ထွက်ရှိလာသော ယင်းမဂ္ဂဇင်းနှစ်စောင်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြရမည်သာ ဖြစ်သည်။ အားပေးကြရမည်သာ ဖြစ်၏။ စာအုပ်ဆိုင်ပေါ်၌ မဂ္ဂဇင်းများ ဖုန်တက်နေသည့်အချိန်တွင် သစ်လွင်တောက်ပစွာဖြင့် ထွက်ရှိလာသော ယင်းမဂ္ဂဇင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
တစ်ခုကတော့ စာပေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို အလေးပေး ဖော်ပြသည့် ‘ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း’ နှင့် ကျန်တစ်ခုမှာတော့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းခုနစ်ဆယ်ကျော် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရွှေခေတ်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အရည်အသွေးကိုပင် မမီသည့် ယနေ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အပံ့ပြုမည့်3 – ACT ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
‘မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး’ ဆိုသည့် စကားလုံးမှာ သတင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာ အစည်းအဝေးများ၊ အင်တာဗျူးများ၌ အမြဲလိုလို မြင်တွေ့ကြားသိနေရသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ယင်းစကားလုံး၏ အကျိုးရလဒ် ထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုမူ သိသာထင်ရှားစွာ ထိတွေ့ခွင့်မရ။3– ACT လို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းမျိုးအတွက် ယင်းကဲ့သို့ အသက်မပါသော စကားလုံးမျိုးဖြင့် မညွှန်းချင်။ တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရွှေခေတ်သို့ ရောက်ရန် နောက်ကြောင်းပြန်ဆွဲ၍ အတိတ်ပြန်သွားရမည်ဟု မဆိုလိုသော်လည်း ခေတ်အလျောက် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော နည်းစနစ်နှင့် ပညာရပ်များကို အသုံးချ၍ ယင်းခေတ်မှ ဝါရင့်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများ၏ ( ယခုအချိန်ထိ ) ဆန်းသစ်နေသော အတွေးအခေါ်များကို ပေါင်းစပ်ကာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဦးမော့လာစေရန် အထောက်အကူပြုသွားမည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းဟုသာ ဆိုချင်သည်။
အမြတ်အစွန်းကိုသာကြည့်၍ အရည်အသွေးကို လျစ်လျူရှူကာ ဖြစ်သလိုရိုက်၍ ပိုက်ဆံရှာသော ဂျင်းကားများ ပေါများနေသည်ဟု ရှုမြင်နေချိန်တွင်3– ACT က နည်းပညာတိုးတက်နေသော်လည်း အရည်အသွေး တိုးတက်မှု မရှိခြင်းများကို ဇိကုပ်ဆွဲတင်ပေးမည့် ဒါရိုက်တာကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟု မြင်မိသည်။
စာအုပ်အမည် -3– ACT ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်း
( Issue 1 / Volume 1 )
အမျိုးအစား - ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်း
(9– issue cinema magazine )
ထုတ်ဝေသည့်တိုက် - Knowledge Book Center
3 – ACT ကို တစ်နှစ်လျှင် သုံးအုပ်နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း ကိုးတွဲရှိသည့် မဂ္ဂဇင်းကြီးတစ်စောင် ထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ မဂ္ဂဇင်းကတော့ ခုလိုဆိုထားသည်။ ရုပ်ရှင်သမားများအတွက် ရုပ်ရှင်ဘာသာစကားကို တွင်ကျယ်စွာ သိရှိဖို့၊ နောက်ပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို သုံးသပ်လေ့လာနိုင်ဖို့ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်တွင် ရုပ်ရှင်လောကမှ လူငယ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ရုပ်ရှင်သတင်းသမား၊ ဝေဖန်ရေးသမား နှင့် ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးများက ရေးသားပြုစုထားသည့် ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ လေ့လာချက် သုတေသနဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးနှင့် ရုပ်ရှင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုံသပ်တင်ပြချက်များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှု အတတ်ပညာလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေသူများ၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကကို စနစ်တကျ ခြေရာခံ လေ့လာလိုသူများနှင့် ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတိုင်း၊ ထို့ပြင် ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်ပြီး မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြင့် ယုတ္တိကျကျ သုံးသပ်တတ်လိုသူများ ဖတ်ကို ဖတ်ရှုရမည့် စာအုပ်ဟုပင် မှတ်ချက်ချရလိမ့်မည်။ ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဘာတွေပါဝင်သည်လဲ ?
ACT – 1 ( Local Cinema Landscape )
အထူးကဏ္ဍအဖြစ် - မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လှိုင်းသစ်ဦးတည်ရာကို ခြေရာခံခြင်း
[ ရုပ်ရှင်အနုပညာလှုပ်ရှားမှု လှိုင်းအသစ် ( New Wave ) တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူများကို အနုပညာလွှမ်းမိုးမှုရှိဆဲ ဖြစ်သော ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်လှိုင်းသစ်ကို ခြေရာကောက် နှိုင်းယှဉ်၍ အိမ်နီးချင်း အာရှနိုင်ငံများမှ ရုပ်ရှင်လှိုင်းသစ်အကြောင်းကို အနည်းငယ် တို့ထိချပြကာ သက်တမ်းတစ်ရာနီးပါးရှိပြီဖြစ်သော မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကတွင်မူ အနုပညာလှိုင်းအသစ်ဟု ခေါ်ဆိုရမည့် လှုပ်ရှားမှုမျိုး မရှိသေးသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်း နှစ်များအတွင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တွင် အသွင်သစ် အနုပညာလှိုင်းသစ်တစ်ခု ရိုက်ခတ်လာတော့မည့် အလားအလာကောင်းများကို မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချထားသည်။]
ဒုတိယဆောင်းပါး - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ ဝဿန်ရုပ်ရှင် … မှစလို့ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ကျင်းပခဲ့သည့် ဂျပန် … အထိ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် - ၆ ) ခုအကြောင်းကို ‘မြန်မာနိုင်ငံမှ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ’ ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့် ပတ်သက်သမျှ အကြောင်းအရာ အကျဉ်းကို တင်ပြထားသည်။
တတိယဆောင်းပါး - စာပေနယ်ပယ်သာမက ရုပ်ရှင်အနုပညာနယ်ပယ်တွင်လည်း တစ်ခေတ်တစ်ယောက် ဆိုသလို အောင်မြင်ခဲ့သူ ဒါရိုက်တာမောင်ဝဏ္ဏ၏ ရုပ်ရှင်အနုပညာလက်ရာ - ‘ခြေဖဝါးတော်နုနု’ အပေါ် လေ့လာချက်စာတမ်းငယ်ကို ‘မောင်ဝဏ္ဏနှင့် ခြေဖဝါးတော်နုနု’ ဆောင်းပါးတွင် ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းရိုက်ကူးခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်စာရင်းကိုပါ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရမည်။
- တိုင်းရင်းသားတို့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် [ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်များတွင် တွေ့ရတတ်သည့် တိုင်းရင်းသားအမှတ်လက္ခဏာတို့ကို လျစ်လျူရှုထားသော ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို တစေ့တစောင်း အကဲခတ် တင်ပြထားသည်။]
- ဥပါယ်တံမျဉ်တစ်ခု၏ ကောက်ကြောင်း “Deception” [ သာမန်ရုပ်ရှင်ကြည့်သူများ သတိမပြုမိသည့် ဥပါယ်တံမျဉ်၏ အပြစ်အနာအဆာများကို ခြေရာကောက်ပြထားသော ရုပ်ရှင်အမြင်ခံစားမှုဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။]
မှတ်ချက်။ ။ မဂ္ဂဇင်းပါ ACT – 1 သည် ခေတ်ပြိုင်ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်ခေတ်ဦးပိုင်း အမွေအနှစ်တို့ကို အထိုက်အလျောက် ကိုင်တွယ်ထားပြီး ခေတ်ဟောင်းနှင့် ခေတ်သစ်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြကာ မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းမှာ မည်သည့်အခြေအနေ မည်သည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသည် ဟူသည့် အခန်းကဏ္ဍကို ချပြထားသည်။
ACT –2( Moving an Image )
ဤကဏ္ဍတွင် အခြား ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူများ၏ လက်ရာဖန်တီးမှု နည်းစနစ်များ၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအဆင့်ရှိ ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အကိုးအထောက်များကို လေ့လာတင်ပြထားသော လူငယ် Film Directors, Video Artists များ၏ လက်တွေ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
- ဇာတ်ညွှန်းပါ ဇာတ်ကွက်တစ်ခုအား ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်း အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း ( From Script to Screen )
- ဒါရိုက်တာနှင့် ရုပ်ရှင်စက်အဖွဲ့သားများအကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်ရှင်းလင်းစေရန် ဖော်ပြထားသော “From Me/To Me” ( 2017 ) ဇာတ်လမ်းတိုမှ စာရွက်စာတမ်းများ။
ဒုတိယ - ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး [ သီးခြားကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိသည့် ဒါရိုက်တာ Wes Anderson ၏ ဆက်တင်ဒီဇိုင်နာ Adam Stockhausen နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အင်တာဗျူးဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။]
တတိယ - ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး [ အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Lisa Leeman ၏ Money Changes Everything or does it ? Considering whether documentaries should pay for play ကို ‘ပိုက်ဆံက အရာရာကို ပြောင်းလဲစေနိုင်လား၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးတဲ့အခါ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပိုက်ဆံပေးသင့် မပေးသင့်’ အဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး ယင်းဆောင်းပါးမှာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးသူများနှင့် ယင်းရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သူတို့အကြား အရေးပါသည့် ဆက်ဆံရေးနှင့် ကျင့်ဝတ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်၏ ကိုယ်တွေ့နှင့်ယှဉ်၍ ပြောပြချက်များ ဖြစ်သည်။]
မှတ်ချက်။ ။ ACT –2မှာ ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှ ဒါရိုက်တာများ၊ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများ၊ Film Maker တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသူများ သို့မဟုတ် Film Making လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းမည့် တက်သစ်စ လူငယ်ဒါရိုက်တာများ လေ့လာရန် အရေးကြီးသော ရုပ်ရှင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သာမန် ရုပ်ရှင်ချစ်သူများပါ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်အောင် ရုပ်ရှင်အတတ်ပညာကို သရုပ်ဖော်ရုပ်ပုံများဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တင်ပြထားတာ တွေ့ရသည်။]
ACT –3( Cinematic Language )
ရုပ်ရှင်ကို သမားရိုးကျ ဖျော်ဖြေရေးရှုထောင့်အဖြစ်သာ မဟုတ်ဘဲ ယင်းထက် အဆင့်မြင့်သည့် ‘ရုပ်ရှင်ကို အနုပညာရှုထောင့်မှ ကြည့်မြင်ခြင်း’ အဆင့်ထိ သွားနိုင်ရန်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိ၏ ရုပ်ရှင်ကို ယင်းသို့ တင်ပြနိုင်ရန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှာ ရှိသင့် သိသင့်သည့် အရည်အချင်းနှင့် ရွေးချယ်အသုံးပြုရမည့် ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းနှင့် နည်းဗျူဟာများ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမည့် ရုပ်ရှင်သီအိုရီ သဘောတရားများကို *ရုပ်ရှင်ဘာသာစကား* Cinematic Language အခန်းတွင် မိတ်ဆက် တင်ပြထားသည်။
Grammar of Film ဟု တင်စားကြသည့် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးခြင်း အတတ်ပညာကို ဤအခန်းတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြင်တွေ့ကြရမည် ဖြစ်သည်။
ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံ အပိုင်း ၃ ပိုင်း (3– Act )
[ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတွင် ပါဝင် ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသော စ၊ လယ်၊ ဆုံး သုံးပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုကို Deception, In the Mood for Love, Moonlight, Dancer in the Dark, Psycho, Citizen Kane, The 400 Blows စသည့် ရုပ်ရှင်များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြီ3း– Art Structure ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံကို စနစ်တကျ ရှင်းလင်းထားသော ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။]
ဖြစ်မြဲဓမ္မာအခြေပြုတင်ပြမှု အနုပညာ သို့မဟုတ် Yasujiro Ozu ၏ ‘နွေနှောင်းရက်ကျန်’ ( Late Spring )
[ ဂျပန်လူမျိုးဒါရိုက်တာ Yasujiro Ozu ၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးစခေတ်တွင် ရိုက်ကူးပြသခဲ့သည့် Late Spring ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဦးတည်ပြီး Yasujiro Ozu ၏ အခြားရုပ်ရှင်လက်ရာများကို တစ်ပါတည်း ယှဉ်တွဲဖော်ပြရင်း ဒါရိုက်တာ၏ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချက်များကို ခံစားသုံးသပ်ပြထားသည်။]
အခြား အရေးပါသော ဆောင်းပါးများ
- ရုပ်ရှင်ကို မွေးဖွားခြင်း ( ၁၈၉၅ - ၁၉၁၈ )
- ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်လှိုင်းသစ်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
- မော်ဒန်ရုပ်ရှင်တွင် တွြေ့မင်ရသော ဒြပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သီးခြားဖြစ်တည်မှု
- အိပ်မက်လုပ်ဆောင်ချက် ( Dream Work )
၁။ - ၆ ) လကြာ အချိန်ပေးပြုစုခဲ့သော ဤစာအုပ်ကို မြင်ရုံဖြင့် လုံးဝ impressive ဖြစ်စေသည်။ စာအုပ် အတွင်းအပြင် ဖွဲ့စည်းပုံကို စနစ်တကျ ဖန်တီးထားသည်။ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုလုံး၏ Layout Design ကို အထူး အားထုတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်လုံးမှာ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ကြည့်လိုက်ရသလို ၊ စာမျက်နှာ နံပါတ်များမှအစ စာမျက်နှာ ဖွဲ့စည်းပုံကို အသေးစိတ် အားထုတ်ထားသော မဂ္ဂဇင်းစာရွက်တိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်တစ်ကား၏ အရေးကြီးသော scene တစ်ခုချင်းစီကို လေ့လာနေရသလိုပင် ဖြစ်သည်။
၂။ ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါသူတိုင်းအတွက် သီးသန့် ထုတ်ဝေထားသော ရောင်းတန်းမဆန်သည့် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်သည်။
၃။ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြစ်သည်။
စာဖတ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ( ကိုတတ်ပ လုပ်ခြင်း မဟုတ်သော ) လောဘတကြီး အကြံပြုချက်များ
၁။ မောင်ဝဏ္ဏ၏ ခြေဖဝါးတော်နုနု လက်ရာကို ရုပ်ရှင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမြင်ဖြင့် ချဉ်းကပ်ထားတာ တွေ့ရသည်။ သမိုင်းတလျှောက် နာမည်ကြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ လက်ရာကို ချဉ်းကပ်မည်ဆိုပါက သူနှင့် ခေတ်ပြိုင် ဒါရိုက်တာများကိုလည်း အမြည်းထုတ်ပြမည်ဆိုလျှင် သာ၍ကောင်းမည်ဟု ခံစားမိ၏။ ဥပမာ - မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာသမိုင်းတွင် ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်ဖြင့် အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ကြသူ ( မောင်ဝဏ္ဏအပါအဝင် ) ဒါရိုက်တာသုံးဦးဖြစ်သည့် သင်္ကြန်မိုးလက်ရာရှင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမောင်တင်ဦး ( နေထွက်သောညဖြင့် အကယ်ဒမီရ ) နှင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေ ( စာရေးဆရာ / ပန်းချီဝင်းဖေ - မပြိုသည့်မိုးဖြင့် အကယ်ဒမီရ ) စသူတို့ကိုပါ မောင်ဝဏ္ဏ၏ ခေတ်ပြိုင်အဖြစ် အနည်းငယ်မျှ ဖော်ပြပေးမည်ဆိုလျှင် စာဖတ်သူအတွက် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာစရာ အဆက်ရသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် အောင်ဖြိုး၏ သုံးသပ်ချက်ဖြစ်သော “မောင်ဝဏ္ဏသည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသည့် ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို ထူထောင်နိုင်သူ” ( စာ - ၅၂ ) ဆိုသည့် မှတ်ချက်မှာ ပို၍ ထင်ရှားသွားမည်ဟု မြင်မိသည်။
ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယ အကြံပြုလိုသည်မှာတော့ ဆောင်းပါးမှတ်ချက်ပြုထားသည့် ‘စာပေကိုမူ ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့်’ ကိစ္စဖြစ်သည်။ မိမိကတော့ အနည်းငယ်မျှတော့ ထည့်သွင်းစေလိုသည့် ဆန္ဒရှိသည်။ အကြောင်းမူ မဂ္ဂဇင်းနောက်ဆုံး စာမျက်နှာပါ Editor’s Recommendations ပါ ဆောင်းပါးရှင် ညွှန်းသော သူ၏ အနှစ်သက်ဆုံး စာအုပ်စာရင်း၌ နိုင်ဝင်းဆွေ၊ ကြည်အေး၊ ကျော်အောင်၊ ဒေ့ါစတိုယက်စကီ တို့၏ Classic များကို တွေ့မိကာ ဆောင်းပါးရှင်မှာ စာသမားတစ်ဦးဟု အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်မိ၍ မောင်ဝဏ္ဏနှင့် သူ့ရုပ်ရှင်အကြောင်း ဖော်ပြရာတွင် သူ့စာပေကိုလည်း မချန်လှပ်ရာဟု မျှော်လင့်မိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းက ဒီလိုရှိသည်။ မောင်ဝဏ္ဏမှာ သာဓု၏ သား၊ သုမောင်နှင့် မင်းလူ တို့၏ အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဖခင် သာဓုမှ စလို့ မောင်ဝဏ္ဏတို့ ညီအစ်အကိုသုံးဦးမှာ စာပေနယ်ပယ်မှာဖြစ်ပြီး မည်သူ့အကြောင်းဆိုဆို သူတို့၏ စာပေလက်ရာများကိုလည်း ချန်လှပ်၍မဖြစ်ဟု သတ်မှတ်မိသည်။
အထူးသဖြင့် မောင်ဝဏ္ဏနှင့် မင်းလူတို့မှာ စာပေနယ်တွင် ရိုးဂုဏ်ကြီးသူများ ဖြစ်ကြသည်ကို ငြင်းမရ။ သူတို့၏ ဝတ္ထုလက်ရာများတွင် ဟိတ်ဟန်ထုတ်ခြင်းများ မပါ၊ သမားဂုဏ်ပြခြင်းမျိုး မရှိကြချေ။ ယင်းမှာပင် မောင်ဝဏ္ဏတို့ ညီအစ်ကိုများ၏ ထူးခြားသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။ စေတနာသန့်သန့်ဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်သည့် အနုပညာလက်ရာများ ( အထူးသဖြင့် ဝတ္ထုလက်ရာများမှာ ) သိပ်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းသည်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနိုင်လှပြီး ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ ရိုးရှင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အနုပညာဖန်တီးမှုများမှာ မောင်ဝဏ္ဏ၏ ရုပ်ရှင်လက်ရာများတွင်လည်း ထင်ဟပ်နေသည်။ ဒါကို ဆောင်းပါးရှင် သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မချပြခဲ့။
အကယ်၍သာ မောင်ဝဏ္ဏ၏ ရိုးသားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စာပေဖန်တီးမှုကို တစ်ကြောင်းမျှ ဖော်ပြခဲ့ဦးမည်ဆိုလျှင် ဆောင်းပါးရှင် သတ်မှတ်ချက်လိုက်သည့် “…….ရိုးရှင်းသည့် ဇာတ်အိမ် အစရှိသည်တို့ကို ပထမဆုံးဇာတ်ကားမှ နောက်ဆုံးဇာတ်ကားအထိ မောင်ဝဏ္ဏ၏ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဟူ၍ သိသာထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်စေပါသည်။” ( စာ - ၅၃ ) ဆိုသည့်စာမှာ သာ၍ ထင်ရှားပြီး စာပေပုံရိပ်ရှိနေသော မောင်ဝဏ္ဏကို ရုပ်ရှင်အရသာမက စာပေအရလည်း ရင်းနှီးနေသူများပါ ဖတ်ရမြင်ရ ပို၍ ဘဝင်ကျသွားစေမည် ဖြစ်၏။
အကြောင်းမှာလည်း Film နှင့် Literature တို့၌ ကြီးမားသော ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည့် Narration ဆိုတာ ရှိနေသည် မဟုတ်ပါလား။ မောင်ဝဏ္ဏ၏ ရိုးရှင်းလှပသော Narrative style မှာ သူ၏ စာပေလက်ရာမှာလည်း ထင်ဟပ်နေသလို ရုပ်ရှင်အနုပညာမှာလည်း တောက်ပြောင်နေသည်သာ ဖြစ်၏။
[ သို့သော်လည်း ယင်းဆောင်းပါးမှာ ‘ဒါရိုက်တာ၏ ကိုယ်ပိုင်အနုပညာဟန်ကို သူတို့၏ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားအပေါ် အဓိက အခြေခံကာ သုတေသနပြုလေ့လာသည့် ဆောင်းပါး’ ဖြစ်သည်ဟု တင်ကြိုပြောဆိုထားရာ စာပေနောက်ခံကို ချန်လှပ်သည့် အမှုအတွက် မိမိအနေဖြင့် အထူးတလည် စောဒကတက်ရန် မရှိပါ။ ဤသို့ဤပုံ ဖြစ်ပါက ပိုကောင်းမည်ဟု ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြင့် ခံစားလိုက်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်၏။]
၂။3– ACT ၏ အဦးအစ ပွဲဦးထွက် မဂ္ဂဇင်းတွင် မောင်ဝဏ္ဏအကြောင်း ပါလာတာတွေ့မိ၍ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ခေတ်ဦးကာလမှာ ထင်ရှားခဲ့သော လန်ဒန်အတ်ဦးအုန်းမောင်၊ အေဝမ်းဦးတင်နွယ်၊ ဦးလွန်းဖေ၊ ဦးရွှေရိုး ( ကာတွန်းဦးဘကလေး )၊ ဦးဘတင်၊ ပီမိုးနင်း စသည့် မြန်မာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများ၏ လက်ရာများကိုလည်း တစ်ဦးချင်း ခြေရာကောက်၍ ယခု မောင်ဝဏ္ဏကဲ့သို့ တင်ပြပေးလိမ့်မည်ဟု ဆက်လက် မျှော်လင့်မိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ခေတ်ဦးအတွင်း ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာများအကြောင်း ပြုစုထားသည့် စာအုပ်စာတမ်းမှာ ရှားပါးလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိမိသိရသလောက် ပခုက္ကူဦးအုံးဖေ စာပေဆုရစာအုပ်ဖြစ်သည့် ‘မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ခေတ်ဦး ဒါရိုက်တာ ( ၁၅ ) ဦးတို့၏ ရုပ်ပုံလွှာများ’ စာအုပ်သာလျှင် အပြည့်အစုံဆုံးအဖြစ် ရှိနေမည်ဟု ထင်သည်။
၃။ ယခုစာအုပ်တွင် ဘာသာပြန် အင်တာဗျူးဆောင်းပါး တွေ့ရသည်။ မကြာခင်ထွက်မည့် စာအုပ်များတွင် ပြည်တွင်းမှ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများ၏ အင်တာဗျူးများကိုလည်း ထည့်စေချင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ် လက်သစ် ဒါရိုက်တာများ၏ ရုပ်ရှင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမြင်၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကအပေါ် ၄င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖတ်ချင်၍ ဖြစ်သည်။ ( ခုနှစ်အရတွက်လျှင် ) ဝါရင့်သည်ဟု ပြောရမည့် ဆရာ့ဆရာကြီးအချို့၏ အင်တာဗျူးများမှာကား လူမှုကွန်ရက်တွင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေ၍လွယ်သောကြောင့် လူငယ်ဒါရိုက်တာများ၏ စကားသံကို ဦးစားပေး သိရှိလိုမှုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဤစာအုပ်ဖတ်ညွှန်းကို3– Act မဂ္ဂဇင်းပါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိဂုံးချုပ်လိုက်မည်။
Vision of3– ACT Cinema Magazine
3 – ACT ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရုပ်ရှင်ကို အနုပညာ၊ အသိပညာ၊ ဉာဏ်ကွန့်မြူးမှုနှင့် ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုစေရန်အတွက် ကြွယ်ဝသော စကားလုံးများနှင့် ရုပ်ပုံများ ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ သမားရိုးကျ ရုပ်ရှင်ဖျော်ဖြေရေးစာမူများကို အလေးမပြုသော မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်အဖြစ် ရပ်တည်ရန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းတွင် ပြည်တွင်းရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းကို လေ့လာသည့် ဆောင်းပါးများနှင့် လက်ရှိ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အားပေးသော ဆောင်းပါးများ အဓိက ပါဝင်ပါသည်။
Our Founder & Editorial Director, Moe Myat May Zarchi, hadaconversation with her inspired academy and cannes award winning director Agnes Varda which will be included in our 2nd issue which will be launched in November.
Congratulations to our 3-ACT cinema magazine Editor-In-Charge Aung Phyoe on his success to screen his short film at the prestigious Locarno Film Festival. We wish you all the best, on behalf of 3-ACT team!
Photo by Nikkei Asian Review
An excerpt from Nikkei Asian Review on 3-ACT Cinema Magazine
“An ambitious new magazine, inspired by new wave cinema movements in France, Japan and Taiwan in the last century, sold hundreds of copies when it was launched in May. Entitled 3-Act, the minimalist-looking bilingual publication features articles on film-making knowhow, film theory and criticism, andare-examination of Myanmar's film history.
"Cinema is not dead, but not alive" is the title of the first edition. Founder and editor Moe Myat May ZarChi explained that while the country hasarich, near 100-year-old cinematic history, the modern cinema scene has stagnated, much to the frustration of audiences. "I know that something exciting is going to come," she told the Nikkei Asian Review, "but Myanmar cinema is in limbo, it is not yet alive."
Nikkei Asian Review﻿
3-ACT is honored to be included in the best-sellers of Sar Pay Law Ka Bookstore
Our 3-ACT Issue 1 - Cinema Is Not Dead But Not Alive is successfully launched at the Secretariat!
မေလ ၂၇ရက်နေ့ ဝန်ကြီးများရုံးတွင်ကျင်းပခဲ့သော3-ACT ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ခန်းလုံးပြည့်ကြွရောက်အားပေးတဲ့ ဧည့်သည်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Panel discussion မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသော panelist များဖြစ်သည့် Ko Ko Htoo Paing Zaw Oo, Ma Thu Thu Shein, Ko Han Zaw, Ko Myat Noe, Ma Khin Sandar Myint, Ma Tin Htet Paing နှင့် Moderator Ko Aung Phyoe တို့ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ပွဲတစ်လျှောက်ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပွဲကိုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံနှင့် video ရိုက်ပေးတဲ့ Ko Naing, Ko Kaung Htet နှင့် Ko Marvin ကိုလဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ပွဲကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးသော Artisa Film, Tagu Films Pyinsa Rasa နှင့် Wathann Filmfest ကိုလဲအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Photo Credit: Naing
Our 3-ACT Team at MRTV-4 Morning Show talking about 3-ACT Issue 1 - Cinema is not dead but not alive
ဆရာတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ ''နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ (အများကြိုက်) ဖျော်ဖြေရေးတွေကို ကြည့်ရင် ယေဘူယျအားဖြင့်
ဒီနိုင်ငံရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပညာ အဆင့်အတန်းကို သိနိုင်တယ်'' တဲ့။
ပရိတ်သတ်က ပိုသိ၊ ပိုဝေဖန်တတ်လာရင်တော့
ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေ ပြီးစလွယ်မလုပ်ရဲ၊ မထုတ်ရဲမှာ အသေအချာပဲ။
ဒီလိုနေတဲ့ 'ရုပ်ရှင်အသိကွက်လပ်' ကို ဖြည့်ပေးမယ့် 3-ACT ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်းလေး ရှားရှားပါးပါး ထွက်လာပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအားလုံး ရုပ်ရှင်အသိတွေ ပိုလာဖို့ ဒီ မဂ္ဂ္ဒဇင်းလေးကို ဖတ်သင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ တစ်နှစ်မှ နှစ်အုပ်ပဲထွက်မှာပါတဲ့။ ထုတ်တဲ့ ဖန်တီးရှင်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါ၏။
Comment from our reader Actress Aye Wiit Yee Thaung
3-ACT Cinema Magazine Launch at Pyinsa Rasa Art Space @ The Secretariat
Panelists for the Panel Discussion on Current Cinema in Myanmar at 3-ACT Issue 1 Launch
the 3rd ACT Begins
An article about 3-ACT on Myanmar Times
3-ACT Cinema Magazine Art Direction Proposal by our Art Director Zune Ei Htet